Tatitry ny FMI : Nihatsara ny tontolon’ny toekarena eto Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaTatitry ny FMI : Nihatsara ny tontolon’ny toekarena eto Madagasikara
22/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanatanteraka iraka manokana teto Madagasikara ny solontena avy amin’ny sampan-draharaha eo anivon’ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI), izay tarihin’ny tompon’andraikitra voalohan’ny iraka, Marshall Mills, ny 7-21 septambra. Tamin’izany indrindra no nanaovan’izy ireo fanadihadiana sy niresahana mikasika ny fivoaran’ny toekarem-pirenena momba ny fanatsarana sy fampandrosoana ara-toekarena izay tohanan’ny fifanarahana amin’ny « Facilité élargie de crédit », na ny FEC.
Araka izany, nanao fanambarana tetsy amin’ny minisiteran’ny Vola sy ny Tetibola (MFB) ireto solontena avy amin’ny FMI ireto fa tsy nitsahatra nihatsara ny tontolon’ny toekarena eto Madagasikara tamin’ity taona 2017 ity. Noho izay indrindra, raha ho an’ny fiharian-karena, tsapa fa nisy fivoarana be, izay nahitana fitomboany 4,1% ny tahan’ny harin-karem-pirenena amin’ny ankapobeny tamin’ity taona 2017 ity. Voalazan’ny FMI, araka izany, fa anisan’ny taha ambony indrindra aty Afrique Subsaharienne. Raha ny fanambarana hatrany, tsy mijanona hatreo io fivoarana io satria hitombo 5,1% ny tahan’ny harin-karem-pirenena amin’ny taona 2018. Anisan’ny nampiakatra izany ny fitomboan’ny famatsiana eo amin’ny tontolon’ny fambolena. Teo amin’ny fiakaran’ny vidim-piainana indray, voalaza fa nahitana fiakarana kely izany teo amin’ny enim-bolana voalohany tamin’ity taona ity noho ireo tranga maro samihafa teto amin’ny firenena, toa ny rivo-doza, ny hain-tany, sns. Raha ny fanambarana hatrany anefa, hilatsaka hatramin’ny 8% izany vidim-piainana izany hatramin’ny faran’ity taona ity, ary hisy fihenana tsy an-kijanona amin’ny taona 2018.
Voahaja ny fepetra
Ankoatra izay, voalazan’ny fanambarana mikasika ny tatitry ny sampandraharaha eo anivon’ny FMI hatrany fa voahajan’ny Fitondram-panjakana avokoa ireo fepetra rehetra takiana na/sy mikasika ny FEC, raha ny faran’ny volana jona teo no jerena. Anisan’izany, hoy i Marshall Mills, lehiben’ny delegasion’ny FMI, ny fampidiram-bolam-panjakana, izay tsapan’izy ireo fa nisy fivoarana goavana. Voalaza mantsy fa efa mihoatra ny tanjona notratrarina izany fampidiram-bolam-panjakana eo anivon’ny sampan-raharahan’ny hetra sy ny fadin-tseranana.
Nambara ihany koa fa ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) dia afaka mampitombo ny tahirim-bola ivelany. Izany dia azo tamin’ny fiakaran’ny vidin’ny lavanila. Raha mikasika ny fifanakalozam-bola ihany koa, voalaza fa nitombo lanja, raha mihoatra amin’ny any ivelany, ny vola malagasy, amin’izao fotoana izao.
Ho an’ny tetibola 2017, nambara fa tanteraka ny vina rehetra tao anatin’ny fandaharan’asan’ny FEC. Manaporofo izany ny fitohizan’ny fifampiraharahana rehetra ahafahana mametraka ny fiaraha-miasa vaovao eo anivon’ny Kaompaniam-pitaterana an’habakabaka nasionaly Air Madagascar. Raha ho an’ny tetibola 2018 indray, nodinihina nandritra ny fizahan’ny FMI fa mbola hitohy ny fampivoarana rehetra tazana tamin’ity taona 2017 ity eo amin’ny lafin’ny fampidiran-ketra. Eo ihany koa ny fijerena ny fandaniam-panjakana izay ezahina ny fanajana ny firafitry ny tetibola mrindra eo amin’ny tahan’ny harin-karena. Mikasika ny orinasa Jirama indray, efa hahena miandalana ny vola sy famatsiana alefan’ny Fanjakana amin’izany, ary ho tazana izany amin’ny taona 2018.
Farany kosa ny fanatsarana sy fanavaozana ny rafitra, izay hoentina hanamafisana ny fandaharan’asa, ary koa ireo tetika rehetra hoenti-mampivoatra ny firenena, indrindra ny resaka politika ara-bola, izay andraikitry ny BFM.
Hotohizana amin’ny taona 2018 avokoa ireo rehetra ireo, indrindra eo amin’ny fahaiza-mitantana izay hoenti-manamafy ny fiaraha-miasa amin’ny any ivelany eo amin’ny ady amin’ny famotsiam-bola. Nanamafy ny fanohanany an’i Madagasikara kosa ny FMI amin’ny fanamafisana ny ezaka ataon’ny governemanta amin’ny lafin’ny fanambaram-pananana sy ny ady amin’ny fahazoana harena tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny.
Marin-toerana ny fifampitokisana ao amin’ireo mpiara-miombon’antoka. Mitohy hatrany ny fikatsahana ny tombontsoam-pirenena amin’ny fivahinianana ataon’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina any Roma- Italia. Tompon’andraikitra telo indray no nihaona taminy omaly, izay samy nanamafy ny fiaraha-miasa, ka hitondran’ny ...Tohiny